Dulmarka SNAP - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta
SNAP waxay caawisaa dadka reer Oregon
Ma ogtahay in in ka badan kala badh dadka Maraykanku ay isticmaali doonaan SNAP (Barnaamijka Kaalmada Nafaqada ee Dheeraadka ah, oo hore loogu yiqiin Kuubannada Cuntada,) ugu yaraan hal mar noloshooda? Hadda in ka badan 680,000 Oregonians-1 ee 6-hela SNAP. Tani waxay Oregon u saamaysaa 3 siyaabood oo muhiim ah:
Isla markiiba waxay saaraysaa cunto miiska
Waxay dejisaa miisaaniyadda qoyska
Waxay gobolka ku soo celisaa in ka badan $1 bilyan oo doollar canshuurta federaalka. $1 kasta wuxuu abuuraa $1.70 dhaq-dhaqaaq dhaqaale oo maxalli ah, isagoo gacan ka geysanaya taageeridda dukaamada maxalliga ah iyo beeralayda
Partners for a Hunger-Free Oregon (PHFO) waxay la shaqeeyaan bulshooyinka maxalliga ah iyo hoggaamiyeyaasha gobolka si ay u horumariyaan barnaamijka heerar badan iyada oo la aqoonsanayo caqabadaha gelitaanka, hirgelinta siyaasado cusub, iyo kordhinta ka qaybgalka gobolka oo dhan. Waxaan diiradda saareynaa xeeladaha lagu kordhinayo gelitaanka iyo ka qaybgalka dadka aan la daboolin oo ay ku jiraan dadka waaweyn iyo ardayda. Shaqaalaheenna wacyigelinta ah waxay u socdaalaan gobolka oo dhan iyagoo siinaya tababaro, qalabyo, agab wacyigelin, iyo taageero la-hawlgalayaasha bulshada.
Waxa laga yaabaa in aad heli karto SNAP haddii aad shaqaynayso, shaqo la'aan ku jirto, ama aad dugsi galayso. Eeg haddii aad u qalanto oo baro sida loo codsado.
Waqtiga xaddidan ee SNAP
Waxaa jira waqtiyo cusub oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha SNAP ee Oregon. Wakhtiyadan xaddidan waxaa loogu talagalay dadka qaangaarka ah ee awoodda leh ee aan lahayn kuwa ku tiirsan (ABAWDs) waxayna saameeyaan kaqeybgalayaasha SNAP ee Benton, Clackamas, Lane, Marion, Multnomah, Washington iyo Degmooyinka Yamhill.
SNAP ee dadka waaweyn
Dadka waaweyn (60+) ayaa leh heerka ugu hooseeya ee ka qaybgalka SNAP ee Oregon iyo guud ahaan dalka. Caawi dad badan oo waayeel ah inay ku xidhmaan gargaarka cuntada!
Macluumaad Dheeraad ah oo SNAP ah
Wax badan ka baro Wacyigelinta SNAP
U dhex gal cutubyadayada tababarka SNAP online
Fiiri tababarka SNAP
Hel Agabka Gaarsiinta
Wada-hawlgalayaasha Oregon-ka-gaajo-la'aanta ah (PHFO) iyo DHS waxay soo saaraan agab asal ah oo loogu talagalay Gargaarsiinta SNAP.
SNAP ee Ardayda Kulliyada
Ardayda waxbarashada sare ee da'doodu u dhaxayso 18-49 waxay u baahan yihiin inay helaan shuruudo dheeraad ah si ay ugu qalmaan SNAP.
Hel Caawinta Barnaamijka
Taageerada wacyigelinta, bandhigyada, & macluumaadka beeshaada.
Isku beeg Faa'iidooyinka SNAP ee Suuqyada Beeralayda
Ku cun gudaha oo ku dhig faa'iidooyinka SNAP ee suuqyada beeralayda ee agagaarka Oregon!
Ma u baahan tahay inaad la hadasho qof jooga DHS?
Hel macluumaadka lagala xidhiidhi karo xafiiska laanta deegaankaaga.
Hel Macluumaadka Xiriirka DHS